ဗမာစစ်အစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုပြင်းထန်လာလေ၊ဒို.လွတ်လပ်ရေးခရီးနီးလာလေ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တပ်မတော်သားများကိုကိုယ့်အကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့သည်၊ဗမာမျိုးချစ်သူများကို မဟာလူမျိုးစိတ်သွင်းခြင်းဖြင့်စည်းရုံးပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ယင်ကဲ့သို.လွဲမှားသည့်လမ်းကြောင်းများကိုလျှောက်လာတာနှစ်(၆၀)ပင်ပြည့်သွား ပြီးဖြစ်သည်၊ယနေ.ဆိုရင်၊ သူတို.၏အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုပြီးတပ်မတော်သားများ၊တိုင်းရင်းသားတပ်များ၊နိုင်ငံသမား များ၊နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များအားဖိနှိပ်မှု၏အပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်သို. ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်၊ဖိနှိပ်ခံသူများကလည်း ဖိနှိပ်မှုဘဝ ချင်းတူသူများဖြစ်သဖြင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းခုခံတော်လှန်လာသည်ကိုတွေ.မြင်ရသည်၊
သူတို.အတည်ပြုထားသည့် (၂၀၀၈)အခြေခံဥပဒေကို မတရားဘူးဆိုတာအားလုံးကသိထားသည်၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပါတီ ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကသူများအသိအမှတ်ပြုလာမလားလို.ထင်ပြီးခွင့်ပြုခဲ့သည်၊ယင်ခွင့်ပြုထားသည့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယနေ.ဆိုရင် ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏အနီးစပ်ဆုံးရန်သူဖြစ်လာနေပြီးဖြစ်သည်၊အလာတူပင်၊အပစ်ရပ်လက် နက်ကိုင်အင်းအားစုများဟာလည်း သူတို.၏အနီးစပ်ဆုံးရန်သူဖြစ်လာသည်၊အားမနာပြောရရင်၊ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်သည့်ကြံ.ဖွတ်အဖွဲ.ဟာလည်း မကြာခင်မှာစစ်အစိုးရ၏အနီးစပ်ဆုံးရန်သူဖြစ်လာမည် ဟုတိုင်းရင်းသားအ သံ၏ယုံကြည်ရသည့်သတင်းပေးပို.ချက်အရသိရှိရသည်၊
စစ်အစိုးရအနေနဲ.တစ်အိုးချက်ထားသည့်ထမင်းကို အကျက်မညီဘဲတစ်ချို.မဆတ်၊တစ်ချု.ိပျော့၊တစ်ချို.နတ်ဆိုရင်စားလို.မရ ပါ၊နေရာကွက်ကြာရွားသည့်မိုးက မြေမစိုးနိုင်ပါ၊မလုံလောက်သည့် စစ်တပ်အင်းအားကို ရှမ်ပြည်နယ်သို.ခဏပို.လိုက်၊ကရင် ည်နယ်သို.ခဏပို.လိုက်လုပ်ပြီးအင်းအားပြလှည့်စားကွက်ကိုအသုံးမဝင်တော့ပါ၊ထို.ကြောင့်၊ယနေ.ဆိုရင်၊ကျနော်တို.အတွက် အောင်ပွဲကနီးလာနေပြီး မကြာခင်မှာ ဘက်ပေါင်းစုံတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါသည်၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ. တိုင်းရင်းသားအသံတိုက်တွန်းချင်တာက၊ ညီအစ်ကိုတပ်မတော်သားများအနေဖြင်. ပြည်သူ.ဘက်ကိုရပ် တည်ပြီး ကျနော်တို.နဲ.ပူးပေါင်းပါ၊သို.တည်မဟုတ်၊အထဲမှာပင်နေပြီး စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏မိသားစုလိပ်စာ၊အလုပ်အ ကိုင်များ၊နီးစပ်သူများ၊သွားလာလှုပ်ရှားတတ်သည့်နေရာများကို သတင်းစုဆောင်းပြီးပေးပို.ကြပါ။ အားလုံးစိတ်ချမ်းသာအော င် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမှတစ်ပါးအခြားနည်းလမ်းများရှာမတွေ.သေးပါကြောင်းအချိန်မနှောင်ခင်နေမဝင်မီလက်တွဲပြီးချ ကြပါစို.။
ဦးပညာစာရကို ဖမ်းဆီးထား၍ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မကျေနပ်